कोरोना केन्द्र काठमाडौं : आउँदा आफैंलाई, जाँदा आफन्तलाई डर – AayoMail
कोरोना केन्द्र काठमाडौं : आउँदा आफैंलाई, जाँदा आफन्तलाई डर
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असोज २० गते १८:४०
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अघिल्लो साता एउटा प्रेस बिफ्रङमा भने– ‘सकेसम्म काठमाडौं नआउनुस्।’
अनि फेरि लगत्तै अर्को दिन भने, ‘जहाँ बस्नुभएको छ, त्यहीँ दसैं मनाउनुस्।’
यसको प्रष्ट सन्देश हो- ‘काठमाडौं संक्रमणको उच्च विन्दुमा छ। सकेसम्म आउँदा आफैंलाई जोखिम छ भने, काठमाडौंबाट बाहिर जाँदा यहाँको संक्रमण उता फैलिने जोखिम हुन्छ।’
उनले यी सन्देशसँगै उपत्यकाभित्र दिनमै १ हजार ५ सयहाराहारीमा संक्रमित पुष्टि भइरहेका छन्।
अघिल्लो साताको एक दिन त उपत्यकाभित्र संक्रमितको संख्या २ हजार नाघ्यो।
मन्त्रालयको यो ‘अनुरोध’ र, दिनदिनै देखिइरहने ‘संक्रमण’ को डरलाग्दो तस्बिर किनार लगाउँदै काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने यात्रु भने बढिरहेका छन्।
अब ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञामा जस्तो कतै जान–आउन पिसिआर वा अरू कुनै सिफारिस चाहिँदैन।
न राजधानी भित्रिनेको कुनै विवरण वा लगत छ, न बाहिर जानेहरूको। स्वास्थ्य परीक्षण त धेरै टाढाको कुरा भइसक्यो।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता एसपी रामेश्वरप्रसाद यादवका अनुसार असोज १ देखि २० गते मंगलबार बिहानसम्ममा ४ लाख १ हजार ३ सय ७३ यात्रुले राजधानी छाडेका छन्।
यो अवधिमा १ लाख ५ हजार ५ सय ३ सवारीसाधन उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा भाइरस संक्रमणको राप दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ।
बाहिरबाट आएकाहरूले न कुनै स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट लिएका छन् न १४ दिन होम क्वारेन्टिन नै बसेका छन्। उनीहरू निर्वाध हिँडिरहेका छन्।
आउनेहरूले मात्रै उपत्यकामा जोखिम मोलिरहेका छैनन्। उपत्यका छाड्नेहरूले पनि जोखिम आफूसँगै बोकेर गइरहेका छन्।
राजधानी छाड्ने अधिकांशले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छैनन्। उनीहरू बिना कुनै परीक्षण बिनाक्वारेन्टिन सिधै घर गइरहेका छन्।
असोज १ देखि १९ गते बिहानसम्म ३ लाख ९३ हजार ३ सय ६१ यात्रु उपत्यका भित्रिएका छन्। जसमा १ लाख ४ हजार ५ सय ९१ सवारीसाधन प्रयोग भएका थिए।
स्थानीय तहले नेपाल बाहिरबाट आउने सर्वसाधारणलाई मात्रै १४ दिन क्वारेन्टिन राख्ने र पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आए घर पठाउने गरेको छ।
तर, नेपालभित्रका जुनसुकै ठाउँबाट आएका भए पनि उनीहरूलाई सिधै घर जान दिने गरिएको छ।
यसरी न उपत्यका छिर्नेहरूको स्वास्थ्य लागत राखिएको छ, न बाहिरिनेहरूको।
उनीहरू कुन स्थानीय तहको कुन ठाउँ गए, सरकारसँग कुनै तथ्यांक नै छैन्, यात्रु र सवारी संख्याबाहेक।
जनस्वास्थ्यविद डा. बाबुराम मरासिनी उपत्यकामा भाइरसको उच्च जोखिम भएका कारण गाउँ जाने सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्डसहित १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताउँछन्।
‘सरकारले जहाँ छौ त्यहीँ दसैं मनाऔं’ भनेको भए पनि सर्वसाधारणले मान्दैनन्। भाइरस संक्रमण फैलिन धेरैजना हुनुपर्छ भन्ने छैन, एकजना भए पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउने क्वारेन्टिन नबस्ने हो भने गाउँ नै सोत्तर हुन्छ।’
चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा उपत्यका छाड्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। उपत्यकामा भाइरस जोखिम उच्च विन्दुमा छ। उपत्यकाबाट बाहिरिनेरूले संक्रमण बोकेर गाउँ जानसक्ने जोखिम उत्तिकै छ।
यो तथ्यांक स्थलमार्गबाट बाहिरिने सर्वसाधारणको मात्रै हो। हवाई मार्गबाट बाहिरिनेको संख्या जोड्ने हो भने अरू थपिन जान्छन्।
घर जाने सर्वसाधारणले अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने, टिका लगाउँदा भौतिक दुरी कायम गरी घर बाहिर तथा खुला स्थान रोज्नुपर्ने मरासिनीको तर्क छ। सरकारले दसैंमा घर नजानुस् भने पनि सर्वसाधारणले नमान्ने उनी बताउँछन्।
‘सरकारले नजा भनेर सबैले मान्दैनन्, चाडबाडकै लागि भनेर कतिपय सर्वसाधारण वर्षौंसम्म घर गएका हुँदैन्न्, उनीहरू स्वाभाविक रूपले जान्छन्,’ डा. मरासिनीले भने, ‘तर, गइसकेपछि आफू परिवार र समुदायका खातिर स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्णपालना गर्नुपर्छ।’
गाउँ जाने सर्वसाधारणले क्वारेन्टिन बस्न र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आनाकानी गरे त्यसको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्ने मरासिनी बताउँछन्।
सरकारले यातायात बन्द गरे पनि सर्वसाधारण हिँडेरै भए पनि दसैं मनाउन गाउँ जाने उनको भनाइ छ।
‘सकेसम्म गाउँलाई जोखिममा नपारौं, जानै परे घरबाहिर टिका लगाऔं, भीडभाड नगरौं,’ मरासिनीले भने, ‘भौतिक दुरी कायम गरौं, कुनै लक्षण देखिए नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई स्वास्थ्य परीक्षण गरौ’ जनस्वास्थ्यविद् डा. मरासिनी भन्छन्।